Nyochaa Cubot H2 bụ nnukwu gam akporo ọnụ maka naanị 140 Euro | Gam akporosis
Anyị na-alọta na nyocha vidiyo na nyocha zuru oke nke njedebe nke mbido China, na nke a nwere akara amaara nke ọma na onye ọ bụla enwebeghị ike ịnwale. Ika ajuju bu Cub gịnị ka nke a na-ewetara anyị Hubot H2 nke m choro itughari dika a oké gam akporo ọnụ na anyị nwere ike nweta online maka naanị 140 euro na weebụsaịtị dị iche iche na-ere ngwaahịa Asia ma ọ bụ ọbụna na Amazon.
Na vidiyo m na-ahapụ dị n'elu usoro ndị a, vidiyo nke dị ihe dị ka nkeji 37, na mgbakwunye nwalee Cubot H2 n'akụkụ ya niile, Achọrọ m ka ị hụ ya na ihu na arụ ọrụ ka ị wee hụ etu o si arụ ọrụ na ezigbo oge, ihe enwere obi ụtọ ịhụ ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-eche echiche ịnweta ọhụụ ọhụrụ gam akporo. Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ịma ihe niile Cubot H2 a na-enye anyị, M na-adụ gị ọdụ ka ị ghara ịchefu nkọwa nke ihe niile m gwara gị na vidiyo yana ịpị «Nọgidenụ na-agụ nke a post» ịmara nyocha nke onwe m nke ọnụ.
1 Cubot H2 nkọwapụta teknụzụ
2 Ihe kacha mma nke Cubot H2
3 Ihe kacha njọ nke Cubot H2
Cubot H2 nkọwapụta teknụzụ
Ihuenyo 5.5 "IPS nwere teknụzụ 2.5D na mkpebi nke 1280 x 720 jụọ ha na ngwa 320.
Nhazi Mediatek MTk6735 Quad isi 1.3 Ghz
Nchekwa n'ime 16 GB na-agbasawanye site na MicroSD ruo 32 GB ikike kachasị kachasị na-akwado
Igwefoto na-aga n'ihu 8 mpx nwere okpukpu abụọ FlashLED autofocus - Lekwasị Anya na oghere 2.2 oghere - FullHD vidiyo ndekọ
Igwe n'ihu 5 mpx na ọnọdụ mara mma na ndekọ FullHD
Njikọ 2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz 3G: WCDMA 900 / 2100MHz 4G ： FDD-LTE 800/1800/2100 / 2600MHz - Wifi 802.11 / bgn - Bluetooth 4.0 - OTG - Radio FM - GPS na aGPS
Atụmatụ ndị ọzọ Dual SIM - Ntughari na Ikuku Ikuku
Batrị 5000 mAh edozi lithium polymer
Akụkụ 149'9 x 76'5 x 9'1 mm
Ibu ibu 230 grams
Ahịa 137 euro na Amazon
Ihe kacha mma nke Cubot H2
Dị ka m na-agwa gị mgbe niile, na-ahapụ ọnụahịa ire ere nke ọha na eze, nke doro anya nke kachasị mma, ihe anyị ga-egosi karịa ihe niile bụ ya ihe agwakọtara batrị 5000 mAh nke na-enye anyị ohere ịchịisi nke ọnụ, nke mere na onye ọrụ gam akporo nkịtị ma ọ bụ onye ọrụ ọ bụla agaghị akwụ ụgwọ ọnụ maka ọ dịkarịa ala ụbọchị atọ. M na-ekwukwa banyere ogologo ụbọchị n'ihi na maka onye gam akporo onye ọrụ nke na-eji gam akporo ya ihe dị ka awa atọ nke ihuenyo arụ ọrụ kwa ụbọchị, ọnụ ọgụgụ a ga-adịgide na-enweghị akwụ ụgwọ ihe dị ka ụbọchị atọ karịa ma ọ bụ obere ebe ọ na-enye oge ngebichi na-arụ ọrụ yana njikọ niile enyere. na ogo kachasị dị elu nke na-aga gburugburu 9 awa nke ihuenyo.
N'aka nke ọzọ, nchikota ya Android 5.1 Lollipop gbakwunyere quad-isi processor na atọ Gigabytes nke RAM Ha na-eme ka ọ bụrụ ọnụ karịa iji mezuo ọrụ ndị anyị na-eme kwa ụbọchị na njedebe gam akporo anyị, ọbụlagodi mgbe ị na-arụ ọrụ dị arọ n'otu oge anyị ga-enwe ike ịkwaga site na ibe anyị na-enweghị nsogbu site na iji gam akporo multitasking. Nke a na-agba ụdị egwuregwu ndị ahụ dị arọ karị Asphalt, Oku ọrụ, ma ọ bụ egwuregwu m gbalịrị dị ka Nwụrụ anwụ ịkpalite 2 ma ọ bụ egwuregwu ejiji Pokemon Go, nke, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ gaghị adị ka ya, bụ egwuregwu na-achọ ọtụtụ akụ sitere na gam akporo anyị. Obi ọmịiko na nke ikpeazụ ahụ, na-enweghị gyroscope nwere njikọ, anyị agaghị enwe ike iji igwefoto nke Cubot H2 anyị chụọ Pokemons n'ụzọ dị adị. Maka ndị ọzọ, ọ bụrụ na anyị chọrọ ezigbo ọnụ iji kpọọ Pokemon Go na-enweghị atụ egwu na batrị ahụ ga-apụ na oge ole na ole, nke a doro anya na ọ bụ nnukwu ngwanrọ gam akporo.
Ezi ihe ọzọ m chọpụtara banyere Cubot H2 n'ime ọnwa a ogologo oge nke iji ọnụ na-eme ihe, bụ na dịka m na-agwa gị na vidiyo ahụ ejikọtara, enwere m ike, n'otu oge ahụ Egwuru m Pokemon Go wee dekọọ ihuenyo gam akporo m n'otu oge ahụ gosipụtara windo na-ese n'elu mmiri nke igwefoto n'ihu Cubot H2, kwa n'otu oge ahụ enwe ike inye njikọ ikuku site na WiFi na ndị ọzọ gam akporo ọnụ ndị na-egwu Pokemon Go, na ihe a niile na-enweghị ahụhụ ọ bụla ike ma ọ bụ nkwụsị na mgbaàmà GPS ma ọ bụ njikọ Internetntanetị. Yabụ na ike yana arụmọrụ nke sistemụ ahụ agabigala nke ọma.
N'akụkụ nke igwefoto jikọtara ọnụ, ma ihu ma azụ n’okwu nke foto ma ọ bụ ndekọ vidiyo, anyị nwere ihe karịrị ezigbo ese foto na agbanyeghị agbasaghị saturate agba a bit nke ukwuuHa doro anya karịa ihe m tụrụ anya na ha.
Banyere olu nke ọnụ, ọ nwere a karia ike zuru oke ịghara ịchọ ekweisi iji lelee vidiyo ma ọ bụ gee ntị na ọkwa na oku ọbụlagodi ebe ndị na-eme mkpọtụ, ihe ọzọ bụ ịdị mma ya ebe ọ bụ na ọ na-ada ụda mkpọ nke na-agbagọ oke na olu ya kachasị elu.
N'ikpeazụ, achọrọ m igosipụta ekwentị ya na njikọta data ya, anyị na-echekwa ihu Dual Sim na IMEI abụọ nke ahụ nwekwara Njikọ 4G LTE na-ejikọ njikọ 20 ma ọ bụ 800 mhz band na-arụ ọrụ na Spain
5000 mAh batrị
Ihe kacha njọ nke Cubot H2
N'akụkụ na-adịghị mma nke Cubot H2 anyị ga-egosipụta ogo nke ụda ahụ, nke ahụ bụ na ọ bụrụ na ọ nwere ike, ọ karịrị ezuru ọbụlagodi na mpụga na gburugburu oke mkpọtụ, dịka m kwuru na mbụ, ụda a ụda mkpọ na ọbụna na ọkwa kachasị elu ya nwere ike ịgwagbu na iwe iwe ntakịrị.
Akụkụ ọzọ na-adịghị mma nke a manyere anyị ịkọwa banyere Cubot H2, bụ enweghị obi abụọ ya akụkụ yana ọkachasị ịdị arọ ya, nke ahụ bụkwa na anyị na-eche ihu Nnukwu njedebe nke nkwarụ kasịnụ ya maka ọtụtụ nwere ike ịbụ gram 230 ya. A ibu na, ọ bụ ezie na ọ dị mkpa na ọ bụ ihe mbụ anyị ga-achọpụta mgbe anyị na-ewepu ọnụ ya na igbe ya, mmadụ na-eme nke a ngwa ngwa, ma ọ dịkarịa ala na nke m, ọ gaghị akwụsị ịhụ ya oke na ọzọ mgbe Anyị na-ahụ nnukwu ọchịchị obodo nke batrị 5000 mAh batara na-enye anyị. Ọ bụ ụgwọ a ga-akwụ ụgwọ maka ịnwe ọnụ yana nnwere onwe dị mma.
Enweghị akara mkpisiaka
Soundda dị mma sitere na ndị ọkà okwu etinyere n’ime ya
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Nyochaa Cubot H2 GREAT gam akporo ọnụ maka naanị 140 Euro
onye na-agba ọsọ dijo
Maka ọnụahịa na atụmatụ m anaghị ahụ ihe ọ bụla na-atọ ụtọ…. HD mkpebi maka 5.5 ″, ogbenye processor, na ikwubiga okwu ókè ibu maka naanị 5.000mAh batrị. Maka otu ọnụahịa ahụ ị nwetara 3Gb ebule, ihe nhazi dị mma, akara mkpịsị aka na ahụ igwe.
Zaghachi onye na-agba oso
Onye na-agba ọsọ 7.0 gbakwunye otu dị iche iche iji maa ndị enyi gị aka maka ịgba ọsọ
Otu esi eme ka gam akporo gi di na igwe ikuku di elu